ဤသည်သယံဇာတဆက်ဆက်ကျမ်းစာလေ့လာမှုရှုပ်ထွေးဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာပီပီပြင်ဆင်မှုမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝအောင်, သင့်ကျမ်းစာလေ့လာမှုအချိန်များ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်လုပျနိုငျတဲ့နညျးငယျသောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။
သငျသညျခရစျတျော၏နောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်ရန်အဓိပ်ပာယျကိုနားလည်သလား? ဘုံအယူအဆမှား ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းသင်၏ကျမ်းစာလေ့လာမှုဆီးတားနှင့်သင့်ကိုနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ် ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွား ။
ဒါ့အပြင်သင်ခရစ်ယာန်ဘာသာယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဘာသာတရားကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကမျြးစာကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအမေရိကန်အတွက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တယ်, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 72 သန်းကမျြးစာအုပျမြားနှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ဝေနေကြသည်။ ဒါနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြည့်နှင့်၎င်း၏ကွဲပြားစာသားကမျြးစာကိုအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သောသူလေးမွတျအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအနည်းငယ်စာရင်းဇယားထည့်သွင်းပေးထားတယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာယနေ့တွင် - အထွေထွေစာရင်းအင်းနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အချက်အလက်
Next ကိုသင်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုချင်တပ်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုက်ညီသောသမ်မာကမျြးရွေးချယ်ဖို့လိုခငျြပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် သမ်မာကမျြး, ဘာသာပြန်ချက် သင်၏အသင်းအုပ်ဆရာကိုအသုံးပြု။ ဒါဟာသင့်ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာဟောပြောသို့မဟုတ်သွန်သင်သည့်အခါလွယ်ကူအပတ်စဉ်မက်ဆေ့ခ်ျကာလအတွင်းတလျှောက်နောက်ကိုလိုက်ရန်စေသည်။
တခြားသူတွေကို အကောင်းလေ့လာမှုမှတ်စုနှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခုကမျြးစာက အရေးကြီးပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသမ်မာကမျြး ။ ကိုယ့်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးကမျြးစာကိုများသောအားဖြင့်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ကမျြးစာကို select လုပ်ပါ။ သငျသညျပိုက်ဆံတွေအများကြီးသုံးဖြုန်းပြီးတော့ကမျြးစာကိုသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးများထဲမှမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှချင်ကြဘူး။
ထိပ်တန်း 10 ဦးကမျြးစာအုပျမြား
ယခုတွင်သင်သည်လေ့လာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အဆင်သင့်အနေ ကမျြးစာကို ပုံမှန်ပေါ်မှာ။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦး၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌အရေးကြီးဆုံးအခြေခံလိုအပ်ချက်များတစ်ခုမှာအသုံးစရိတ်အချိန်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါကမျြးစာလေ့လာဖို့အမှန်တကယ်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုစတင်ရန်ကူညီရန်တယောက်နည်းလမ်းဆက်ကပ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်နည်းလမ်းအရင်ကဆိုရင်အဘို့သည်ကြီးရမည် သို့သော်သူကလေ့လာမှုမဆိုအဆင့်ဆီသို့ရည်ရွယ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျကမျြးစာလေ့လာမှုပိုမိုအဆင်ပြေဖြစ်လာသကဲ့သို့, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရန်စတင်နှင့်သင့်ကျမ်းစာလေ့လာမှုအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစေမည်ကြောင်းအကြိုက်ဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး Daily သတင်းစာကျိန် ဆို. ပူဇော် Plan ကိုဖန်တီးနည်း
သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းများအတွက်အပိုဆောင်း Tools များ
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာလေ့လာမှုနည်းလမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်နားလည်မှုသို့ထပ်မံနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားပါနှင့်လျှောက်ထားကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအပိုဆောင်း tools တွေကိုထည့်သွင်းရန်လိုပေမည် သညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားတော် ။ တစ်ဦးက သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှု အစီအစဉ်ကိုသငျသညျကတစျခုလုံးကိုသမ်မာကမျြးတစျဆငျ့ကိုဖတ်ရှုဖို့အလေ့အကျင့်ကိုလုပ်အဖြစ်တသမတ်တည်းနှင့်စည်းကမ်းကျန်ရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ယနေ့တွင်သမ်မာကမျြးမှတ်ချက်အနဲ့ကျမ်းစာဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်တစ်ခုစည်းစိမ်ကိုရရှိနိုင်ကြသည်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုသင်အကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီသော tools တွေကိုရှေးခယျြကကူညီဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။
ထိပ်တန်း Bible Commentary
ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းကမျြးစာကိုရှာရန် Tools များ
'' Conocer '' ၏ conjugation
ဒုတိယအ Punic စစ်ပွဲ (218 - 201)
ဂျပန် Tamashii ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
Scuba ချင်းမတူသောအများအတွက်သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks
အကောင်းဆုံး Woodstock ဖျော်ဖြေ
က Short ဆံပင်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုနည်းလမ်းများဆစ်ခ်တစ်ဦးဗေါင်းအောက်မှာတစ်ဦး Bun Make နိုင်သလား
Iftar: အ Daily သတင်းစာလူငယ်များသို့-Fast ဿွာန်စဉ်အတွင်း
တစ်ဦး Gambler ရဲ့ဂိမ်းအဖြစ် Mahjong
Excel ကို SIGN ရာထူးအမည်
'' Entender '' ၏ conjugation
အမာခံများက The ခရစ္စမတ်စျခှငျကုမ္ပဏီ
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမြေပုံ: အဓိပ္ပာယ်, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သိကောင်းစရာများ
တစ်ဦးက Business ၏7တိုင်
အလိုအလျောက် Teller စက်များ - ATM စက်
တစ်ဦးမှော် Herb လွမ်းသူ့ပန်းခွေ Make